धेरै वर्ष पहिले, रूसी खरीदारों कोरिया देखि सजावटी र छाला हेरविचार उत्पादन पत्ता लगाउन थालेका छन्। "स्वाद" रुझान, महिला आनंद से छक्क, किनभने एशियाली उत्पादनहरु कुनै तरिका चिरपरिचित युरोपेली र अमेरिकी ब्रान्डहरु गर्न कमसल छन् थिए, र केही गुणस्तर पनि यसलाई surpasses। साथै, पनि वितरण संग कोरियाली सामान लगभग 2-3 पटक सस्ता थिए।
सबैभन्दा लोकप्रिय ब्रान्ड को एक "misha" कस्मेटिक्स भयो (- Missha मूल मा)। वर्तमान मा यो महिला र सबै उमेरका बालिका लागि व्यक्तिगत हेरविचार उत्पादन को सबै भन्दा लोकप्रिय ब्रान्ड को छ। विस्तृत लोकप्रियता, कोरियाई कस्मेटिक्स "misha" जितेको छ जो, कारण कम मूल्य र उच्च गुणवत्ता, तर पनि देखिने परिणाम प्रदान प्राकृतिक र सुरक्षित सक्रिय सामाग्री को सेट प्रत्येक उत्पादन को संरचना मा उपस्थितिको केही नियमित आवेदन पछि मात्र छैन।
Missha एक बिट
नाम अन्तर्गत सामान को पहिलो बिक्री ठाउँमा सुरू Missha अनलाइन बजार भयो। हामी 2000. घर ब्रान्ड मा यो खुलेको कोरिया मा पहिलो अफलाइन स्टोर2वर्ष पछि महिलाहरु को लागि आफ्नो ढोका खुलेको छ।
त्यसपछि आफ्नो सफलता प्रेरित पहिलो सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आफ्नो मातृभूमि भेला कस्मेटिक्स "misha", कम्पनी व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय बजार मा पहिले नै उत्पादन प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरे। चीन, जापान, अष्ट्रेलिया, इन्डोनेशिया, ताइवान, भियतनाम, क्यानाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाराग्वे, काजकस्तान, किर्गिस्तान, कम्बोडिया, टर्की, मेक्सिको, युरोप र, पाठ्यक्रम, अन: क्षणमा, संसारभरि त्यहाँ 1,500 भन्दा बढी आउटलेट Missha छन् रूस।
Missha को विचारधारा
कर्मचारीहरु ब्रान्ड गाइड कि आदर्श वाक्य किफायती मूल्यहरु मा उच्च गुणवत्ता कस्मेटिक्स संग उपभोक्ताहरु प्रदान गर्न छ। धेरै ल्याब मा, यो नियम अनुसार छ र सौन्दर्य हेरविचार लागि उत्पादनहरु को एक किसिम विकसित: केश को जरा देखि र नङ को सुझाव समाप्त हुन्छ।
त्यो ठूलो उत्पादन र बिक्री गर्न स्वीकारे अघि बिल्कुल सबै कोरियाली "misha" कस्मेटिक्स धेरै परीक्षण र गुणस्तर नियन्त्रण पारित। साथै, नयाँ प्रविधिहरू को विशेषज्ञहरु विकसित र लागू नियमित रूपमा, जुन उद्देश्य - संरक्षण र हरेक स्त्रीको सौन्दर्य बृद्धि गर्न।
सामान Missha को समूह
ब्रान्ड को कस्मेटिक्स सुविधाको लागि निम्न समूह विभाजित गर्न सकिन्छ जो शीर्षक, सयौं समावेश:
कस्मेटिक्स र klinsery।
नङ र मैनीक्योर।
Facials र शरीर उपचार।
मानिसहरू गरेको लाइन।
कस्मेटिक्स र klinsery
यो समूह Missha सम्पूर्ण दायरा बीच अमीर मानिन्छ। निम्न नाम प्रतिनिधित्व कस्मेटिक्स:
बी बी-क्रीम (कायाकल्प को प्रभाव र साथ छाला, को पुनर्जनन पारदर्शी leveling आधार टोन प्रभाव क्रीम);
अनुहार छाला (पाउडर, correctors, रहनसहन लागि आधार, शरमाना लागि स्प्रे मेकअप फिक्सिंग क्रीम);
ओठ कस्मेटिक्स (balms, ओठ, ठोस र तरल lipsticks, पेंसिल, प्राइमरों Tinta);
आँखाहरु लागि कस्मेटिक्स (पेंसिल, काजल, यसको लागि आधार, छाया अन्तर्गत आधार तरल eyeliner, आँखा छाया र ब्रो, फिक्सिंग हालतमा);
klinsery (जलरागी तेल, gels र तरल)।
बी बी क्रीम को कोरियाई ब्रान्ड को "अनुहार" हुन मानिन्छ। आफ्नो खर्च मा यो यति लोकप्रिय कस्मेटिक्स बन्न थियो "misha"। समीक्षा cosmetologists विभिन्न देशहरूमा अद्भुत यस प्रकारको उत्पादन छाला smoothes र एलर्जी प्रभाव कारण छैन भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्नुहोस्। श्रेणी मा तपाईं 1,200 1,500 गर्न rubles देखि लागत को एक माध्यम पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
रूसी पसलहरुमा रंग अनुहार को सुधार प्रयोगको लागि अभिप्रेरित उत्पादन 300 500 rubles देखि एक लागत छ। (Correctors र पाउडर) बाट 900 मा 2400 rubles। (शरमाना, जग र tonal स्रोतहरू)। तिनीहरूलाई को सबै भन्दा जस्तै पदार्थ समावेश मोती पाउडर, चिप्लेकिरो खकार, कोलेजन विभिन्न एंटीओक्सिडेंट र रंग निकाल्छ।
आँखा र ओठ लागि कस्मेटिक्स "misha" मात्र हो स्थिर, तर पनि, महत्वपूर्ण, hypoallergenic। । छैन 1000 भन्दा बढी rubles - औसत मा, 500-600 rubles, लिपस्टिक खर्च चम्कन्छ। Pencils, आँखा छाया र eyeliner fashionistas 600 rubles खर्च हुनेछ।, तर तपाईं प्रतिहरू र कुनै 300 भन्दा बढी rubles पाउन सक्नुहुन्छ। काजल पनि 700 मा 900 rubles देखि खर्च हुनेछ।
यो टिप्पण लायक छ जलरागी तेल। मुख्यतया तिनीहरूले बी बी क्रीम हटाउन डिजाइन, तर सामान्य मेकअप हटाउँदा लागि पूर्ण छौं। तेल एकदम बिट आवश्यक छ, त्यसैले 200 एमएल मा बोतल बारेमा 1500 rubles खर्च। लामो समय को लागि पर्याप्त।
मैनीक्योर लागि सबै
Oddly पर्याप्त, यो खण्ड therein प्रस्तुत माल को संख्या मा केही मध्ये एक छ। तर, यो अझै पनि त्यहाँ के खोज्न छ:
को लाह अन्तर्गत रूपरेखा;
को वार्निश हटाउने लागि अर्थ;
नङ र cuticles को हेरविचार लागि तेल।
Missha को संग्रह मा प्रतिनिधित्व सबै पेंट्स र कोटिंग्स, कुनै 300 भन्दा बढी rubles खर्च गरेका छन्। तरल 170-200 rubles खर्च हुनेछ। तपाईं एसिटोन बिना एक विशेष उपकरण खोजिरहेको यदि यो बारेमा 500 rubles हुनेछ भुक्तानी गर्न, (रेखा मा जस्तै उपलब्ध पनि छ)।
यो खण्ड Missha - दोस्रो सबैभन्दा सामान सजावटी कस्मेटिक्स पछि यो मा प्रतिनिधित्व। यहाँ तपाईं सबै कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ आधुनिक महिला आवश्यक हुन सक्छ:
अनुहार टनिक (विरोधी बुढ्यौली कम, गीला, मोडेलिंग, पुल-अप, विरोधी-भडकाऊ सुखदायक);
अनुहार (उठाने प्रभाव, विरोधी-बुढ्यौली मइस्चराइजिंग) को लागि क्रीम र gels;
छाला क्लेंसेर (peels, मास्क, खनिज पानी, साबुन, तेल, Foams, पाउडर, लोशन, पट्टियां, gels, लोशन, पैच);
विरोधी उमेर बढन उत्पादनहरु (लोशन, क्रीम, Serums, emulsions, सुगंध दिन र रात प्रभाव);
हातमा (लोशन, मास्क) को लागि अर्थ;
खुट्टा (peels, क्रीम, स्प्रे, मास्क, Scrubs) को लागि अर्थ;
शरीर हेरविचार (gels, deodorants, क्रीम, लोशन, तेल, स्प्रे, Scrubs) को लागि उत्पादन;
Eau डे Parfum।
कस्मेटिक्स "misha" शरीर हेरविचार शाब्दिक उपयोगी घटक को एक किसिम संग crammed छ। उत्पादनहरु को संरचना सुनको कण, दुर्लभ एशियाली र अफ्रिकी बिरुवाहरु, पाउडर, रत्न सर्प peptides प्लेटिनम कणहरु को अर्क रूपमा पनि यस्तो विदेशी सामाग्री पाउन सकिन्छ। 300 rubles देखि: मूल्य दायरा एकदम व्यापक छ। 5000-6000 rubles को जटिल सेट गर्न मास्क एउटा अनुहार लागि। सबैभन्दा शरीर क्रीम 500-700 rubles भन्दा कुनै थप खर्च हुनेछ। अत्तर 2100 देखि 2300 rubles गर्न लायक छ। प्रति 30 एमएल मा शीशी।
यो धेरै किनमेल समीक्षा कमाउन, अर्को वर्गमा छ। कस्मेटिक्स "misha" बाल निम्न नाम द्वारा रूस मा प्रतिनिधित्व छ:
लुगा धुने र उपचार (स्प्रे, मास्क, milks, Serums, सुगंध, balms, कंडीशनर, शैंपू) को लागि हो।
कपाल को हेरविचार उत्पादन (शैम्पू, कंडीशनर, मास्क) को मानक सीमा बारे 2,000 rubles खर्च हुनेछ। औषधीय सीरम कुनै 900 भन्दा बढी rubles पाउन सकिन्छ। apiece।
कारण विभिन्न परिस्थितिमा, यो मानिसहरूका उपस्थिति हेरविचार छ कि हुन्छ। तसर्थ, बलियो सेक्स cosmetologists विशेषज्ञहरु Missha लागि डिजाइन विशेष उत्पादनहरु:
विरोधी उमेर बढन सीरम;
ताजा लोशन र tonics;
आपतकालीन रिकभरी र छाला को उपचार को लागि gels।
तर, पुरुषहरु को एक धनी वर्गीकरण - यो कस्मेटिक्स घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा "misha" छ। यसको बारेमा cosmetologists समीक्षा, हुनत धेरै रूपमा, तर ती सबै भन्दा सकारात्मक हो: राम्रो hydration, सुरक्षा वातावरण गर्न जोखिम देखि र माइक्रो traumas को तीव्र निको बढाउँछ। खुशी को मूल्य - 1000 बाट 1700 rubles गर्न। प्रति एकाइ।
यी अझै कोरियाली कस्मेटिक्स "misha" विशेषता द्वारा गर्न सकिन्छ कि सुविधाहरू छन् - लगातार उत्पादन, expertly मिलान घटक, प्राकृतिक सामाग्री र आधुनिक प्रविधिहरू को संश्लेषण सुधार। समीक्षा खरीदार ब्रान्ड सकेसम्म उच्च अन्त उत्पादनहरु संग आफ्नो ग्राहकहरु प्रदान गर्न सबै आफ्नो आवश्यकता र आवश्यकताहरु खातामा लिन प्रयास गरिएको छ, किनभने यो एक बरु ठूलो भूमिका खेल्छन्।
तेल छाला अंकित? कसरी राम्ररी यसलाई हेरचाह गर्न सिक्न!
मालिश तेल के हो?
छोराछोरीको बढेको गलसुए
जो एनालग "Prostamol" यो सस्ता र अझ प्रभावकारी छ?
कम्प्युटरमा कसरी जमीन गर्न? सुझाव र चाल
अपार्टमेंट लागि वृद्ध हेरचाह। सम्पत्ति उत्तराधिकार गर्ने अधिकार संग वृद्ध हेरचाह
एनी Brontë: छोटो जीवनी
कपाल हटाउने: स्थायी वा अस्थायी रूपमा?